गोपनीयता नीति र कुकीज
बारम्बार प्रश्न: रूमेटोइड गठिया दुवै पक्ष मा हुन्छ?
श्रेणी: आर्थोपेडी 0
रोग को प्रगति को रूप मा, लक्षण अक्सर कलाई, घुँडा, टखने, कोहनी, कूल्हों र काँधहरुमा फैलन्छ। धेरै जसो अवस्थामा, लक्षण दुबै पक्ष मा एउटै जोडा मा हुन्छ ...
उत्तम उत्तर: तपाइँ कसरी एक ingrown toenail चढाई बाट रोक्न सक्नुहुन्छ?
के पर्वतारोहीहरु को औंलाहरु न ing्गिएका छन्? रक क्लाइम्बिंग जुत्ता snugly फिट गर्न को लागी डिजाइन गरीएको छ, जहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। जब तपाइँ आफ्नो खुट्टा एक जुत्ता मा राख्नुहुन्छ कि ...
स्पाइनल ट्याप सामान्यतया कति समय लाग्छ?
काठको पct्क्चर कति समय लाग्छ? एउटा काठको पct्क्चर ३० देखि ४५ मिनेट को आसपास लिन्छ, तर तपाइँ अस्पताल मा पनी बस्नु पर्ने आवश्यकता छ।
बारम्बार प्रश्न: के तपाइँ स्पाइनल ट्याप को लागी एनेस्थेसिया अन्तर्गत राख्न सक्नुहुन्छ?
एक स्थानीय एनेस्थेटिक सुई सम्मिलित हुनु भन्दा पहिले पञ्चर साइट सुन्न को लागी तपाइँको तल्लो पछाडि इंजेक्शन छ। स्थानीय एनेस्थेटिक छोटो रूपमा डंक हुनेछ यो इंजेक्शन को रूप मा ....
तपाइँको प्रश्न: त्यहाँ गठिया संग मान्छे को लागी वित्तीय सहायता छ?
रोगी पहुँच सञ्जाल फाउण्डेशन RA संग व्यक्तिहरु लाई चिकित्सा सहायता प्रदान गर्दछ, मेडिकेयर द्वारा कभर गरीएको छ, जो दस एफडीए-अनुमोदित रोग-परिमार्जन उपचार संग सम्बन्धित बाहिर को जेब लागत को लागी भुक्तान गर्न मद्दत चाहिन्छ।
सूखी गर्मी रुमेटीइड गठिया को लागी राम्रो छ?
तातो स्नान, जस्तै तातो स्नान, मांसपेशिहरु मा गर्मी को प्रवेश मा सहायता गर्न सक्छ र राम्रो दुखाई राहत प्रदान गर्न सक्छ। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सुक्खा सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ ...
पुरानो osteomyelitis को कारण के हो?
Osteomyelitis को धेरैजसो केसहरु स्टेफिलोकोकस ब्याक्टेरिया, जीवाणुहरु को प्रकार सामान्यतया छाला मा वा स्वस्थ व्यक्ति को नाक मा पाईन्छ। कीटाणुहरु प्रवेश गर्न सक्छन् ...
बारम्बार प्रश्न: कुन प्रणाली मस्तिष्क र रीढ़ को हड्डी को रक्षा गर्दछ?
मेनिन्जेस झिल्ली हो जुन मस्तिष्क र रीढ़ को हड्डी लाई कभर र सुरक्षा गर्दछ। मेनिन्जेस को तीन तहहरु छन्: Dura mater, जो हड्डी को नजिक छ। Arachnoid, जो…
के हुन्छ जब तपाइँ एक कण्डरा छैन?
यदि उपचार नगरिएको छ, अन्ततः यो अन्य खुट्टा र खुट्टा समस्याहरु को परिणाम हुन सक्छ, जस्तै सूजन र तपाइँको खुट्टा को तल मा लिगामेन्ट मा दुखाइ (plantar ...
प्रति पाउन्ड कति मिनेटमा तपाइँ पोर्क लोइन पकाउनुहुन्छ?
मैले कहिले सम्म मेरो पोर्क टेंडरलोइन वा पोर्क भुना पकाउनु पर्छ? पोर्क रोस्ट को लागी औंला को नियम मासु को प्रति पाउन्ड 25 मिनेट पकाउन को लागी हो ...
12... 6,772 अर्को
- लेखक को बारे मा
नमस्कार, मेरो नाम मरियम हो। मेरो ब्लग मा म मेरो पेशा को बारे मा रोचक लेख साझा - म एक आर्थोपेडिक डाक्टर हुँ।
प्रश्न: PRP गठिया को उपचार गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाइँलाई के लाग्छ जब तपाइँ ओस्टियोपोरोसिस हुनुहुन्छ?
तपाइँको प्रश्न: के हुन्छ यदि म हिप प्रतिस्थापन पछि धेरै हिँड्छु?
प्रश्न: सेप्टिक गठियाले शरीरलाई के गर्छ?
के तपाइँ एक कृत्रिम खुट्टा संग चरवाहा जुत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ?
के यूटीआई ओस्टियोमाइलाइटिस हुन सक्छ?
तपाइँको प्रश्न: अश्वगंधा ओस्टियोआर्थराइटिस को लागी राम्रो छ?
2021 २०२१ तपाइँको पोडियाट्रिस्ट
संपर्क | हाम्रोबारे | गोपनीयता नीति र कुकीज
सही धारकहरु को ध्यान! सबै सामाग्री कडई सूचना र शैक्षिक प्रयोजनहरु को लागी साइट मा पोस्ट गरीएको छ! यदि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि कुनै पनी सामग्री को पोस्टिंग तपाइँको प्रतिलिपि अधिकार उल्ल्घन गर्दछ, हामीलाई सम्पर्क फारम को माध्यम बाट सम्पर्क गर्न को लागी सुनिश्चित गर्नुहोस् र तपाइँको सामग्री हटाइनेछ!